Ch 10 Mark – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Mak / Ch 10 Mark
10:1 Na ebili, O wee si n'ebe ahụ gaa n'ógbè ndị dị gburugburu Judia n'ofè Jọdan. Na ọzọ, ìgwè mmadụ bịara ọnụ n'ihu ya. Na dị nnọọ ka ọ bụ agba nkịtị na-eme, ọzọ ọ kụziiri ha.
10:2 Na-eru nso, ndị Farisii jụrụ ya ajụjụ, anwale ya: "Iwu ọ kwadoro ka nwoke na-eleghara ya na nwunye ya?"
10:3 Ma na nzaghachi, O wee sị ha, "Gịnị mere Mozis-ezikwa gị?"
10:4 Ha we si, "Moses nyere ikike dee a ụgwọ nke ịgba alụkwaghịm na-eleghara ya."
10:5 Ma Jizọs gwara ha, sị: "Ọ bụ n'ihi na ekweghị ekwe nke obi gị na o dere na iwu n'ihi na ị.
10:6 Ma site na mmalite nke ihe e kere eke, Chineke mere ha nwoke na nwaanyị.
10:7 N'ihi nke a, ka nwoke gārapu n'azụ nna ya na nne, na Ọ ga-ejide ya na nwunye ya.
10:8 Na abụọ ndị a ga-abụ otu anụ ahụ na. Ya mere, ha bụ ugbu a, ọ bụghị abụọ, kama otu anụ ahụ.
10:9 Ya mere, ihe Chineke Igbere, Ekwela ka onye ọ ikewa. "
10:10 Na ọzọ, ke ufọk, -eso ụzọ ya jụrụ ya ajụjụ banyere otu ihe.
10:11 Na ọ sịrị ha: "Onye ọ bụla ohu ya na nwunye ya, wee lụọ nwunye ọzọ, na-akwa iko megide ya.
10:12 Ma ọ bụrụ na a nwunye ohu ya na di ya, na bụ nwunye ọzọ, ọ na-akwa iko. "
10:13 Ha we me ya ụmụntakịrị, ka o wee na-emetụ ha. Ma na-eso ụzọ dụrụ ọdụ ndị me ka ha.
10:14 Ma mgbe Jizọs hụrụ nke a, ọ were iwe, na ọ sịrị ha: "Ka ụmụntakịrị bịakwute m, na adịghị gbochie ha. N'ihi na ndị dị otú ahụ dị ka ndị a bụ alaeze Chineke.
10:15 Amen m asị unu, onye ọ bụla ga-anabata alaeze Chineke dị ka nwatakịrị, agaghị abanye ya. "
10:16 , Na-amakụkwa ha, na-ebikwasị ha aka n'isi, ọ gọziri ha.
10:17 Na mgbe ọ hapụwo na ụzọ, otu onye, -agba ọsọ n'elu na gburu ikpere n'ala n'ihu ya, jụrụ ya, "Ezi Onye Ozizi, ihe m ga-eme, ka m wee meere ndụ ebighị ebi?"
10:18 Ma Jizọs sịrị ya, "Gịnị mere akpọ m ezi? Ọ dịghị onye bụ ezi ma e wezụga onye Chineke.
10:19 Ị maara na precepts: "Akwala iko. Adịghị egbu. Ezula ohi. Adịghị asụ akaebe ụgha. Unu aghọgbula. Sọpụrụ nna gị na nne. "
10:20 Ma na nzaghachi, o wee sị ya, "Onye Ozizi, ndị a niile edebewo m site na nwata. "
10:21 Mgbe ahụ, Jizọs, ele anya na ya, hụrụ ya n'anya, o wee sị ya: "Otu ihe kọrọ gị. Gaa, ere ihe ọ bụla i, na-enye ndị ogbenye, na mgbe ahụ ị ga-enwekwa akụ n'eluigwe. Na-abịa, soro m."
10:22 Ma O wee pụọ eru újú, ọ na e wutere site n'okwu. N'ihi na o nwere ọtụtụ ihe onwunwe.
10:23 Na Jizọs, ele anya gburugburu, kwuru-eso ụzọ ya, "Olee otú ike ọ bụ maka ndị nwere akụ na ụba na-abanye n'alaeze Chineke!"
10:24 Na-eso ụzọ ibobo okwu ya. Ma Jizọs, na-aza ọzọ, sị ha: "Little ụmụ, otú ike ọ bụ n'ihi na ndị na-atụkwasị ego ike ịba n'alaeze Chineke!
10:25 Ọ bụ mfe n'ihi na a camel gabiga anya nke a agịga, karịa ọgaranya ịba n'alaeze Chineke. "
10:26 Ha na-eche ọbụna ihe ọzọ, si n'etiti onwe ha, "Ònye, mgbe ahụ, nwere ike zọpụta?"
10:27 Na Jizọs, ele anya na ha, kwuru: "N'ebe mmadụ ọ gaghị ekwe omume; ma ọ bụghị na Chineke. N'ihi na Chineke nọ ihe nile kwere omume. "
10:28 Na Pita malitere ịsị ya, "Lee, na anyị ahapụwo ihe niile, soro gị. "
10:29 Na nzaghachi, Jizọs kwuru, sị: "Amen m asị unu, E nweghị onye hapụrụ ụlọ, ma ọ bụ ụmụnna, ma ọ bụ ndị nwanyị, ma ọ bụ nna, ma ọ bụ nne, ma ọ bụ ụmụ, ma ọ bụ ala, n'ihi m maka Oziọma,
10:30 ndị na-agaghị na-enweta otu narị ugboro na ihe dị ukwuu, ugbu a, n'ime oge: ụlọ, na ụmụnna, na ụmụnna nwanyị, nne na, na ụmụ, na ala, ha na mkpagbu, na n'ọdịnihu afọ ndụ ebighị ebi.
10:31 Ma, ọtụtụ n'ime ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ, na ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ. "
10:32 Now they were on the way ascending to Jerusalem. And Jesus went ahead of them, na o juru ha anya. And those following him were afraid. Na ọzọ, taking aside the twelve, he began to tell them what was about to happen to him.
10:33 "N'ihi na, le, we are going up to Jerusalem, and the Son of man will be handed over to the leaders of the priests, and to the scribes, na ndi-okenye. And they will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles.
10:34 And they will mock him, and spit on him, and scourge him, and put him to death. Na n'ụbọchị nke atọ,, he will rise again.”
10:35 Na Jems na Jọn, ụmụ Zebedi, bịaruo ya nso, si, "Onye Ozizi, anyị na-achọ na ihe ọ bụla anyị ga-ajụ, ị ga-eme maka anyị. "
10:36 Ma ọ sịrị ha, "Gịnị ka ị chọrọ ka m meere gị?"
10:37 Ha we si, "Nyekwa anyị, na anyị nwere ike na-anọdụ, otu nri gị na ndị ọzọ na na ekpe gị, na ebube gị. "
10:38 Ma Jizọs sịrị ha: "Ị na-amaghị ihe ị na-arịọ. Ị na-aṅụ si chalice site na nke m na-aṅụ, ma ọ bụ ka i mee baptizim, bụ baptizim na na m ga na-baptizim?"
10:39 Ma ha sịrị ya, "Anyị nwere ike." Mgbe ahụ, Jizọs sịrị ha: "N'ezie, ị ga-aṅụ si chalice, site na nke m na-aṅụ; na ị ga-baptizim na baptism, na m ga na-baptizim.
10:40 Ma na-anọdụ ala n'aka nri m, ma ọ bụ na m hapụrụ, abụghị nke m inye gị, ma ọ bụ n'ihi na ndị ahụ ọ a kwadebere. "
10:41 Na iri, n'elu nụrụ nke a, malite na-iwe n'ebe Jems na Jọn.
10:42 Ma Jizọs, na-akpọ ha, sị ha: "Unu maara na ndị o yiri ka ịbụ ndú n'etiti ndị Jentaịl na-achịkwa ha, na ndị ndú ha na-egosipụta ikike n'ebe ha.
10:43 Ma, ọ bụghị otú a n'etiti unu. Kama, onye ọ bụla ga-aghọ ukwuu ga-ejere unu ozi;
10:44 na onye ọ bụla ga-mbụ n'etiti unu ga-orù nile.
10:45 Ya mere, kwa, Nwa nke mmadụ abịaghị ka ha ga-ejere ya, ma nke mere na ọ ga-ejere na ga-enye ndụ ya dị ka a mgbapụta maka ọtụtụ ndị. "
10:46 Ha wee Jeriko. Na ka ọ nọ na mwube si Jeriko na-eso ụzọ ya na a dị nnọọ ọtụtụ ìgwè, Bartimaeus, nwa Timaeus, otu nwoke kpuru ìsì, Nọdụ arịọ n'akuku uzọ.
10:47 Na mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Jizọs onye Nazaret, ọ malitere iti mkpu, na-ekwu, "Jesus, Nwa Devid, obi-ebere n'aru m. "
10:48 Na ọtụtụ dụrụ ọdụ ya na-jụụ. Ma o tiri mkpu niile ọzọ, "Nwa nke David, obi-ebere n'aru m. "
10:49 Na Jizọs, ada ka, na-ezi ya na-akpọ. Na ha na-akpọ nwoke ahụ kpuru ìsì, na-asị ya: "-Adị n'udo. Bilie. Ọ na-akpọ gị. "
10:50 Na nkedo wezụga uwe ya, ọ leapt bilie gakwuru ya.
10:51 Na na nzaghachi, Jizọs wee sị ya, "Kedu ihe ị chọrọ, na m ga-emere gị?"Ma nwoke ahụ kpuru ìsì wee sị ya, "Master, ka m wee hụ. "
10:52 Jizọs wee sị ya, "Gaa, okwukwe gị emewo ka ị dum. "Ma ozugbo ọ hụrụ, o soro ya na ụzọ.